GURYO ISKU DHAFAN OO ISKU DHAFAN OO LAGA SAMEEYAY POLYCARBONATE: ARAGTIYO, TILMAAMO RAKIBO (IYO SIDOO KALE DHIRTA FILIMADA AMA QAABABKA DHISMAHA EE DHISMAHA BIRAHA) - DHISMAYAASHA
Tilmaan-bixinno abuurista aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate ama filimka hoostooda oo gacmahaaga ah
Maanta, ku dhowaad dhul kasta oo gaar loo leeyahay, waxaad arki kartaa qalab aad u yaqaan oo aad u ballaaran, sida aqalka dhirta lagu koriyo, kaas oo loogu talagalay in lagu koro dalagyo kala duwan.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa khudaarta sii kordhaysa, laakiin waxay inta badan ku beeraan labada caws iyo ubax. Waxaa jira noocyo badan oo lagu koriyo ah, oo ka duwan midba midka kale ee cabbirka, qaabka iyo sifooyinka waxqabadka.
Mid ka mid ah noocyada waa aqalka dhirta lagu koriyo.
Ilaa hadda, lagu koriyo oo lagu tumo waxay noqdeen kuwo caan ah sababtoo ah dhaqdhaqaaqooda iyo ficil ahaanshaha hawlgalka. Way ku habboon yihiin, sababtoo ah si sahlan ayaa looga gudbi karaa meel kale.
Waxaa suurtagal ah in la sameeyo aqalka dhirta lagu uruuriyo ee ugu fudud naftaada u samee. Shaqada noocan oo kale ah ma adkaan doonto, sababtoo ah uma baahna xirfado gaar ah, iyo sidoo kale joogitaanka qalab kasta oo dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, dhismaha qalabka noocan oo kale ah wuxuu u baahan yahay maalgashi yar oo maaliyadeed.
Waa lagama maarmaan in la helo sabir iyo dadaal. Iskuulada qashinka lagu daro ayaa loo tixgeliyaa inay ku habboon yihiin. Inkastoo qaab dhismeedka adag, si dhakhso ah ayey u dhistaan.
Hawsha ugu weyn - Ka taxadar in aad abuurto microclimate gaar ah gudaha aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo u oggolaanaysa dhirta inay dareemaan wanaag iyo waxay kordhin doonaan kororka dhalidda.
Noocyada rakibidda kuleylaha isku dhafan
Guryo la isku qurxiyo waxay leeyihiin tiro ka mid ah faa'iidooyin kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Maqnaanshaha dabaysha oo dhammaystiran, iyo sidoo kale u samayso khatar ah dhirta.
Joogista caynsanaanta wanaagsan.
Xayawaanka, sida hawada, ayaa kor u qaadaya xoogaa adag, taas oo xaqiijinaysa maqnaashaha heerkulka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Ilaalinta kalsoonida ka soo horjeeda cayayaanka dhirta kala duwan.
Si loo dhiso aqalka dhirta lagu kululeeyo ee gacmahaaga, waxaad u baahan tahay inaad heshid qaybta ugu muhiimsan ee naqshadahan - waa xirmo khaas ah oo gaar ahoo leh afarta dhinacyo iyo godad badan oo leh dhexroor 10 mm.
Godadkaasi waxay u baahan yihiin in si ammaan ah loo xiro. tuubooyinkalaga soo qaaday sariir yar oo kala duwan - waxay si fudud ugu dhex gali karaan noodhka. Farsamada rakibaadda waxay u ogolaanaysaa in uunan dhisin dhismaha khafiifka ah si loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale si aad ah ayuu u kordhiyaa nolosheeda.
Ka dib marka la furo matxafyada iyo dibadbaxyada waxaa laga dhisay qoryaha iyo clamshells, marxaladda labaad waa in la bilaabo.
Howsha ugu muhiimsan waa in si habboon loo soo saaro dhammaan xididka lagama maarmaanka ah. Si aad u hesho qaybahan, waxaad u baahan tahay inaad qaadatid gawaarida, 1 m sare iyo qiyaastii 3-4 cm dheer, ballaadhkoodu waa inay ahaadaan 4-5 cm.
Sida tuubooyinka laga soo qaaday clamshell, si taxadar leh ayaa loo qodaa si ay u sameeyaan godadka leh dhexroor yar.
Amaahtaas oo lagu samayn doono tuubooyin copper, waa in la googooyaa qaybo yaryar, ka dibna marka la jarjarayo si adag ayaa loo geliyey gawaarida iyada oo leh taako ku filan oo xoog leh. Hawlgalkani waa tallaabo kama dambays ah oo kama dambeys ah oo lagu dhisayo qaab dhamaystiran oo loogu talagalay aqalka dhirta lagu burburiyo.
Xaaladaha halkaas sida daboolka filim caag ah ayaa la doortay, walxadan waa in lagu hubiyo laba dhinac oo ka soo horjeeda dhismaha iyada oo gacan ka heleysa dhalooyin caag ah oo caadi ah oo ka buuxsamay biyo, kuwaas oo awoodi doona inay riixaan filimka.
Munaasabaddan oo kale waxay gacan ka geysan doontaa xaqiijinta ilaalinta joogtada ah ee dalagyada beeraha ee mustaqbalka ka imanaya gustsada adag ee dabaysha.
Si kastaba ha ahaatee, khabiirada ayaa kugula talinaya in ay isticmaalaan baco balaastik ah oo keliya kiisaska xad-dhaafka ah, haddii ay suurtagal tahay, ku bedel wax alaab kale si loo daboolo.
Isgoysyada lagu qurxiyo filimka hoostiisa ee muuqaalka dhul beereed ee muuqaalka ku dhow lama mid ah aqalka cagaaran ee caanka ah. Waxay u badan yihiin sida hoyga caadiga ah, taas oo lagu garto qaab fudud, tani waxay si gaar ah ula socotaa haddii aad isticmaasho balaastiig si aad u daboosho.
Tan iyo taariikhda, cariishyada, meelaha ay ka mid yihiin dhismaha noocan oo kale ah, looma tixgelinayo casriga casriga ah. Tani waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in dhismaha aan habooneyn uu u muuqanayo mid aan loo baahnayn, sababtoo ah waxaa jira noocyo kala duwan oo badan oo ka mid ah qalabka si fiican u hagaajinaya beerta.
Tiknoolajiyadaani waxay ku dhowdahay illaa soddon iyo shan sano, laakiin dad badan ayaa weli jecel.
Qalabka isku laabashada iyo qolfahaaga Aad u fududahay isticmaalkaKadib, haddii baahida loo qabo, waxaa loo wareejin karaa meel kale oo ku haboon. Intaas waxaa sii dheer, koriyo-dhaqameedyada waa kuwo aad u mobile - marka la naqshadeynayo naqshadeynta ayaa gebi ahaanba la burburin karaa, ka dibna lagu qarsoon yahay geeska garaashka ama dusha.
Waa maxay faa'iidooyinka polycarbonate?
Polycarbonate waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah tiknoolajiyadda cusub ee ugu sarreysa.
Maqaalkani waa mid gaar ah. Waa mid khafiif ah, adkaysi leh oo leh nolol waqti dheer. Isaga wuxuu leeyahay hantida soo socda:
Maqnaanshaha sirta ee fiican.
Maaddadu waxay ku wareejisaa iftiin badan.
Xayawaanka lagu kalsoon yahay.
Maqnaansho maadooyin kala duwan oo firfircoon.
Elasticity waxay ku sii jirtaa mudo dheer.
Ha u dhiibin saamaynta burbur ku ah arrimaha dibadda.
Waxa uu ku guulaystay inuu galiyo galaaska iyo filimka suuqa dhismaha. Quraaradu waa alaabo khatar ah oo la isticmaalo. Qaabdhismeedka laga sameeyay polycarbonate, waa mid aad u adag in la googooyo, muraayaduna waa suurtogal, ka dibna waa inaadan ka saari karin suurtogalnimada dhaawac ama dhaawac gacanta iyo xataa lugaha geeddi-socodka nadiifinta jajabyada.
Intaa ka sokow, muraayad waa walax culus, taas oo, dabcan, laguma sheegi karo naqshadeynta polycarbonate.
Alaabada la sameeyey iyadoo la isticmaalayo polycarbonate oo lagu sifeeyo saamaynta fiican ee insulating.
Taasi waa sababta aqalka dhirta lagu dhejiyo lakabkani wuxuu joogteyn karaa si joogto ah oo u fiicneyn heerkulka hawada hawada gudaha aqalka dhirta lagu koriyo wakhti dheer.
Sababtoo ah dhammaan sifooyinka guud ee dabeecadda polycarbonate, xaalado aad u wanaagsan ayaa loo abuuray koritaanka degdegga ah ee dhirta, horumar weyn oo ka jira xaaladdooda iyo kororka cabbirka.
Thanks to darbiyada cufan, kuwaas oo laga sameeyey polycarbonate joogto ah, Dhibaatada tooska ah ee qoraxda tooska ah ee tarjumaadda, taas awgeed, maqnaanshaha baahida loo qabo xasilin dheeraad ah waa la damaanad qaadayaa.
Marxaladda ugu dambeysa rakibidda aqalka dhirta lagu dhejiyo daboolka leh ee la isku qurxiyo, taas oo ah dharka qaabka ugu muhiimsan, waraaqaha polycarbonate ayaa si ammaan ah loogu hagaajiyay tubooyinka clamshell.
Dhibaatadu waxay leedahay qaar ka mid ah alaabooyinka u oggolaanaya in alaabtu ay qaadato qaab shaxan ah, sababtoo ah waxay yihiin kuwo aad u jilicsan, taas oo ah faa'iido badan oo codsigooda ah.
Waxaa sidoo kale jira lagu koriyo oo looxyo lagu dhejiyo qaab bir ah. Waxay leeyihiin muuqaal casri ah oo casri ah, sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa ikhtiyaar dheeraad ah oo loogu talagalay diyaarinta aqalada xagaaga.
Qaab dhismeedyadani waa kuwo horeba dhismo adag, laakiin iyada oo la abuurayo qaab sawir ah, waxa loo rogi karaa qaab dhismeed dabacsan.
Dhismahan adag wuxuu noqon doonaa mid ku haboon inuu hawlgalo mudo dheer.
Mabaadi'da aasaasiga ah ee rakibaadda qaabka, iyo sidoo kale marxaladaha lagu rakibo nooca caleenta dhirta lagu koriyo:
Waa lagama maarmaan in la doorto aagga saxda ah ee goobta.
Qiyaasaha dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo ayaa hore loo go'aamiyey.
Sketches ee aqalka dhirta mustaqbalka ayaa la sameeyaa.
Qalab koronto ah ayaa la sameeyaa.
Dhinaca dheer ee aqalka dhirta lagu koriyo waa in uu ku yaallaa dhinaca bari ilaa galbeed.
Dhismaha birta waa inuu ku yaallaa meel nadiif ah oo iftiin leh.
Naqshadeynta waxaa lagu rakibay sida ay u socoto qorshaha horay loo diyaariyey.
Guryaha la isku qurxiyo waxaa loogu talagalay in ay qabtaan hal shaqo - hubinta ilaalinta sii socota ee dhirta ka timaadda waxyeelada waxyeelada leh ee dibadda, iyo sidoo kale deegaanka.
Taasina waa sababta ay dadka isticmaala khibraduhu u doortaan in ay doortaan qalabka tayada sare leh ee dhismadooda si ay dhirta u helaan inta ugu badan ee nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah koritaanka iyo horumarka.